August 2016 - iftineducation.com
habenka aqal galka
iftineducation.com – Gabdho waxaa jira oo jecel in looga sheekeeyo hanti iyo guri dahab, kuwoo waxaa jira ka helo waxbarashada, sidoo waxaa la helaa naago jecel in looga sheekeeyo jacayl iyo raaxo, maxay dareemaan gabdhaha marka looga sheekaynayo raaxada? Naagaha waxay dareemaan marka loo sheegayo istiinka iyo raaxada macaan xaddhaaf ah, xagga jirka, jirkooda waxay ka dareemaan jiriirico daran xaadada ayaa…
iftineducation.com – Afti la sameeyay ayaa lagu sheegay in 70% haweenka aysan helin macanka gariirka galmada taasina ay sabab u tahay iyadoo ninka uusan sameyn gogol xaar bashaal ah oo ku filan gabarta si dareemaheda u kacaan ama in uusan aqoon goobaha sida gaarka ah gabarta uga kacsato . Hadaba si gabarta u hesho gariirka raaxada(U Bislaato ,Kacsi La Ooyso) waxaa…
iftineducation.com – Kaneecada dheddigga ah ayaa dullin sidaha cudurka Zika u gudbin kareysa ugxaanteeda iyo dhallaankeeda. Kaasi maahan warkeena balse waa daraasad ay samaysay Jaamacada Texas. Daraasada ayaa intaa raacisay in dilitaanka kaneecada waaweyn aysan wax weyn soo kordhinayn. Cilmibaareyaal ayaa arinkaa wax ka yiri shalayto Isniintii. Jaamacadaa cilmibaareyaal ka tirsan ayaa markaa damacsanaa inay arkaan bal in kaneecada dheddigga ah…
iftineducation.com – Dumarka waxaa ay yihin kuwa qiyaasa ama sheegi kara ninka wax uu yahay ama uu galo marka laga fiirsho dhanka ciyaaraha ka dhaca sariiraha iyo waliba sida uu ula dhaqmo bulshada inteeda kala waayo dumarka waxa ay yihiin ishi qaaate aan wax ka fakan. Dumarka ma jecla nink ay ku arkaan ilaa sadex calamadood mid kood marka la joogo…
iftineducation.com – Nin maseer ay ku dishay xaaskiisa Oo tala raadis ah Magaceygu Waa Ismaaciil Kaamil Kunool Dalka Soomaliya Qaasatan Gobolka Hiiraan Magaaladiisa Baladweyne, Waan Idin Salaamaya Dhamaan Bahda Shabakadda Somalisouthafrica.com Qaasatan Waxaan Salaamaya Talo Celiye Xaaji Tahriib oo Talooyinka Dadka uu Siiyo aan aad Ugu Qancay. Waxaan Ahay Xaasle Sedex Caruur Leh, Dhibka i Heysta Waxa uu Yahay Xaaskayga ayaa…
iftineducation.com – Bigrada gabadha waa shayga ugu muhimsan oo tilmaamaya dhowrsanaanteeda, xuubka bekrada waxa dusha ka dahaara bushimaha yaryar ee cambarka. Xuubkaasi oo dillaaca habeenka gabadha la bekra-jebinayo, wuxuu yeeshaa kolka uu dillaaco faraqyo ama raaman, waana la dareemi karaa jiritaanka raamankaasi ilaa laga gaaro dhalmada koowaad kolkaasi oo uu si toos ah u baaba’ayo. Dillaaca xuubka bekrada waxa la socda…
iftineducation.com – GALMADA HA SAMEYNIN ADIGOO KAADI KU HEYSO WAXAA LAGA QAADAA…. Ragga ayaa la ogaaday in ay raaxo wali ah ka helaan codka hoose ee loo yaqaan riinka kaasoo ay sameeyaan dumarka Xiliga loo diyaar garoobayo galamada oo ay socato baashida ama istiminta. Dumarka intooda badan ayaa aaminsan in ay ceeyb tahay haddii ninkeedu uu maqlo iyadoo sameeneyso codka hoose…
iftineducation.com – Xariirka nolosha sariirta ayaa ka mid ah tiirarka ay ku tiirsan tahay asaaska guriga lamaaanaha , waxaana jira kara qaladaad labada dhinac ka dhaca taasi oo wasaqeyn karta hanaan socodka nolosha sariirta Si loo helo nolol sarriireed oo ku dhisan dareen sareeya waxa ay iftineducation.com ku siineysaa talooyin aad kaga hor tagi karto fashil ku yimaada kulanka naxariista Xal…
iftineducation.com – Qaabka Xaaskaaga Biyaha looga Keeno inta aadan Biya Bixin Qaabka dumarka looga keensado in ay kaa hor biya baxaan.Hadda waxaan sheegaynaa qaababka ugu fiican ee loogu tago dumarka xiliga galmada si ay u dareemaan raaxo macaan badan.Ma doonaaysaa in mar walbo xaaskaagu ay kaa hor biyo baxdo? oo ay aad kuu jeclaato Hadaba dhinacyadaan hoos ku xusan ka mar.…
Asal Guurka Afka Hooyo Iyo Habacsananta u Hiilimtiisa
iftineducation.com – ASAL GUURKA AFKA HOOYO IYO HABACSANAANTA U HIILINTIISA!!! Waxaan halkan idiin kuso gudbin doona maqaal an xooga ku saarayo ififaale asal guur luuqadeed oo ku socda afka hooyo iyo dib u dhac iyo habacsanaan ka muuqata in la muquuniyo ama la hor istaago asal guurka afka soomaaliga. Arintan ayan u arkay in ay lagama maarmaan u tahay in wax…